SIDA LOO ABUURO LOONA KACO KIIMIKAADA DACHA, NOOCYADA KALARKA - DHIRTA DAWOOYINKA
Cawska yar oo udambeysan - kariimka, oo daboolaya sharooto qallalan oo qalalan oo ubax leh ubax, ayaa muddo dheer soo jiitay dareenka dadka. Masriyiintii qadiimiga ahaa waxay u isticmaaleen forme for ujeedooyin dhaqan.
Cilmi-yahannada hore (Avicenna, Dioscorides, Theophrastus) waxay ku qoranyihiin sifooyinka cajiibka ah ee kiriim (antiviral, antifungal iyo antibacterial). Giriigyada ayaa loogu yeeray warshadan "neefta nolosha."
Daaciga qadiimka ah ee Rome, waxaa la aaminsan yahay in kalluunka uu siiyey awood xoogan, maskax ahaan iyo awoodda. The Slavs waxay rumaysnaayeen in ay gubayaan digaagaha kicinta iyo neefsashada qiiqa, waxay la kulmi karaan ilaahyada iyo jinni ee awowayaashood.
Thyme, oo sidoo kale loo yaqaan 'thyme', ayaa sii wata maanta oo cajiib ah - saynisyahanada casriga ahi waxay sheegaan in mishiinnada cudur keena aysan u adkeysan karin kicinta.
Thyme: sharaxaadda dhirta
Thyme (Thatus "Thymus") wuxuu leeyahay magacyo kala duwan: Swan, Cawska Bogorodskaya, Cuntada liinta, miro, Chavor, shimbiraha, fooxa, basbaaska bata, iwm.
Cudurka Thyme wuxuu ka kooban yahay qiyaastii 400 nooc, kuwaas oo si weyn loogu soo bandhigay Eurasia, America iyo Waqooyiga Afrika. Inta badan wakiiladoodu waxay leeyihiin qaabab isku mid ah:
dhererka dilka dilaacsan (dhererku wuxuu ku xiran yahay nooca iyo kala duwanaanta 5 ilaa 35 cm);
lignified jiifa (ama duqsigu) afkoda leh xididdada fiiqan, daboolay jilif brown;
lafdhabarta lafdhabarta leh villi, qashin iyo caano;
caleemaha adag waxay ku yaalliin midab, midabka jaalaha ah ilaa cagaarka madow;
qaabka iyo qiyaasta caleemaha waxay kuxirantahay noocyada (xayawaanka, wareega iwm);
ubaxyo yaryar ah oo ku yaal ubaxa (soodhadhka aasaasiga ah - casaan, caddaan, guduud, noocyo kala duwan oo midabyo leh oo midabo badan leh);
dhadhan fiican leh (diiran).
Thyme Blooms June iyo dhammaadka August.
Ma taqaanaa? Thyme waxaa ku jira asiidh (quinic, caffeic, oleic, ursuloic, oleanolic, iwm.), Xanjo, vitamin C, flavonoids, macdan, iwm. Thyme waa aphrodisiac xooggan (waxaa ku jira thymol iyo carvacrol). Marka qufaca, cadaadiska dhiigga oo sarreeya, xayawaankaaga shimbiraha iyo shaallada ayaa ka caawiya kor u qaadista difaaca.
Noocyada ugu waaweyn ee kekahaaga
Dhirta aan qabin waxa ay ka faa'iideysatay booska Eurasia, America, Waqooyiga Afrika. Thyme genus Thyme waxaa matala noocyo badan oo kala duwan (waxaa ka mid ah kuwa ay adagtahay in la kala saaro xitaa khabiiro takhasus leh). Noocyada ugu waaweyn:
Yourme caadiga ah (Thymus vulgaris);
xayawaankaaga (Thymus serpyllum) ama xayawaankaaga;
Kiriimka liin-macaan (Thymus vulgaris var citriodora).
Thyme (Thyme) - dhaqanka soo jiidashada, iyo koritaanka iyo daryeellida iyaga ma keeni doonaan dhibaatooyin.
Wadanka noocyada noocaan ah waa Spain iyo koofurta Faransiiska (halkan waxaa laga helaa duurjoogta halkaanna waxaa laga heley guri). Waxaa lagu kala saaraa caleemo cagaaran oo yar yar (0.5-1 cm) oo ah qaabka lanceolate iyo ubaxyo guduud ah. Waxaa ka mid ah hoosaadyo kala duwan. Noocyada kala duwan ayaa la jaray (Alba - caddaan ah, iskudubarid - maroon, nooc cufan ah - Elfin, iwm)
Noocyada Homeland (Cagaarshahaaga xayawaankaaga iyo xajmigaaga waa isku mid) - Mediterranean Mediterranean. La yaqaano in ka badan 2000 sano. Waxaa la beeray tan iyo qarnigii 16aad. Kordhi dhammaan Yurubta - laga bilaabo Giriig ilaa Iswiidhan, Aasiya.
Leaves waa maqaar, xudduudaha aan la duudduubin (sida kugadaada). Ubaxyada - dhar guduudan oo leh casaan casaan. Noocyo badan oo leh midab kala duwan oo caleemo ah iyo caleemo kala duwan ayaa la sameeyey. Abaareyaha iyo abaaraha. Warshad malab weyn.
Lemon Smelling Thyme
Meesha asalkeedu yahay Koonfurta Faransiiska. Bacriminta dabiiciga ah ee ubaxa casaanka ah. Ciriiri ee ariigyada tartiib tartiib ah liin. Caleemaha yar yar (caleemo cagaaran) oo leh da '.
Lium Thyme waxay ka cabsanaysaa cimilada qabow, waa lagama maarmaan in hoyga la dhigo. Wuxuu u baahan yahay manjooyin joogto ah. Noocyo badan oo noocyo ah ayaa la sameeyay (Silver Queen - waxay baxaan xuduudaha, Golden Duarf, Bertram Anderson - ka baxo dhibco huruud ah, iwm)
Ma taqaanaa? Noocyada khudradda ah ee kookada ayaa lagu qadariyaa cuisines aduunka oo idil. Faransiiska, Kiriimku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah dhirta Provence iyo Bouquet Garni oo dhir udgoon, xagaaaga ukumaha England waa kan labaad, ka dib cagaarka Spain iyo xayawaanka Giriigga ah ayaa lagu kariyaa kariimka, Bartamaha Europe waa xajmiga waa walxaha lagama maarmaanka ah ee maraqa iyo digirta, saliidda la shiilay iyo kuwa dufanka leh, dalalka Carabta waxaa lagu daraa caanaha caanaha ee caanka ah, Jamaica - xilliga Jerk. Cagaarka liinta ayaa jilicsan oo keena liinta liinta si ay u dhadhamiso hilibka iyo suxuunta kalluunka. Thyme waxaa lagu daray minti si shaaha.
Sida loo abuuro oo u koro shinni, xeerar beereed
Thyme uma baahnid shuruudo gaar ah, oo si weyn ayuu u fududeeyaa beerista iyo daryeelka isaga oo ku jira sirqoollada beerta. Waxaa lagama maarmaan ah in la ilaaliyo dhowr xaaladood oo ay siiyaan dhirta:
meesha saxda ah ee dhulka;
sax ku qor taariikhda dhulka;
waraabinta saxda ah iyo quudinta.
Doorashada goobta iyo carrada
Thyme waxay jeceshahay qorraxda (hooska cawska ayaa la soo baxaa, baadiyaha waxay noqotaa wax aan badneyn, way ka sii dari kartaa) iyo iftiin (oo leh biyo qoyan) carrada dhexdhexaad ah. Markaad dooraneyso goobta waa in ay tan tixgelisaa. Goobta beerto waa in aan si joogta ah u dhicin dabaylaha (xajmiga ayaa ka baqa cabsida).
Waa muhiim! Haddii ciidda ay "culus tahay" iyo biyo la geliyo, ka hor inta aanad beerin, waxaa lagama maarmaan ah in la "dilaaco" ciid.
Goorta iyo sida loo beero shinnida
In beerta, miraha qudaarta waxaa lagu beeray guga iyo dayrta. Waqtiga ugu wanaagsan ee beerto doogta waa guga (marka uu dhaxan yahay dhamaadka). Maalinta beertu waa inay ahaato mid diiran oo qorrax leh. Hawlaha degitaanka waxaa ka mid ah tallaabooyinka soo socda:
qodo dalool (cabirkeedu waa inuu ahaadaa laba jeer cabbirka dheriga dhalada);
Diyaarso qalab beerto ah - dhulka iyo ciidda isku dhafan. Qayb ka mid ah isku dar ah ku shubay godka;
ka saar seedling ka dheriga iyo toosi rhizomes;
beerahaaga ku beeray godadka (derbiyada beeraha waa inay noqdaan sida dheriga);
ku shub walxaha haray ee godka, tufaax iyo ku shub.
Si aad u ilaaliso xaaladaha qolkaaga waxaad xajin kartaa abuur iyo geedo wakhti kasta oo sanadka ah. Waxaa wanaagsan in la gooyo goynta dhammaadka xagaaga. Waxaa lagama maarmaan ah in la qaado dheriga si xididdada dhirta ay dabooli karto burqashada dhulka.
Ma taqaanaa? Thyme waa dabeecad dabiici ah, oo loo adeegsado karinta si loo kordhiyo nolosha shelf ee cuntada iyo pickling. Ubaxyada Thyme, adigoo ilaalinaya dhammaan dhadhanka dhirta, waa kuwo jilicsan oo udgoon.
Xeerarka Daryeelka Thyme
Thyme waa wax aan qabyo ahayn, daryeel waa mid fudud, iyo sii kordhaya beerta of thyme waxaa la yareeyey waraabinta marxaladaha, jaridda, loosening ciidda.
Noocyada waraabinta iyo dhirta quudinta
Si aad si habboon u biyo u hesho, waxaad u baahan tahay inaad la socoto xaaladda carrada. Waraabinta waa inaysan aheyn mid aad u badan (laga bilaabo qoyan dhirta ayaa bilaabi doonta in ay xanuunto). Biyaha waxaa loo baahan yahay in ka badan haddii ay dhacdo abaarta, inta lagu jiro xilli sii kordhaya iyo ka hor ubax.
Iyadoo roobab badan, carrada waxaa la geyn karaa dhagaxyo yar yar. Wakhti ahaan, for aeroska wanaagsan ee xididada, waxaa lagama maarmaan ah si loo dabciyo ciidda leh hoe, ka takhalusi haramaha. Thyme uma baahna dhar gaar ah.
Ciidda waa la bacrin karaa ka hor intaan lagu beerin humus ama bur ah (tani waxay noqon doontaa mid ku filan sannad). Sanadka soo socda, horaantii xagaaga, waa inaad quudiso bacriminta macdanta.
Sidee loo sameeyaa kicin manjooyin
Gogol-diirinta joogtada ah ee kiriimadu waxay hubinaysaa cufnaanta baadiyaha, xajinteeda.
Gooyo waxaa la fuliyaa horraan gu'ga (barafka la barafeeyey, daciif ah, caleemaha jiran) ama ka dib ubax (khafiifinta). Ka hor inta aadan adayga gooyay guga, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u eegto caleemaha dhintay - waxay weli iman karaan nolosha.
Muuqaalka muuqaalka dhibcaha brown on caleemaha ayaa tilmaamaya la'aanta hawada iyo iftiinka - waxaad u baahan tahay inaad dhuuban baadiyaha. Caleemaha waxaa lagu xiraa qaybta qorraxda (2/3 of stem) oo leh xiirto fiiqan.
Waa muhiim! Si aad u hesho tiro badan oo cagaarka ah, kiriimada waxay u baahan tahay in la gooyo marar badan loomana oggola inay ubaxdo.
Qodobbada Nafaqada Thyme
Thyme wuxuu u kobcin karaa laba siyaabood - by abuur iyo vegetatively.
First of dhan, waxaa lagama maarmaan ah in la xoroobo meesha abuurka laga bilaabo dhammaan cawska (miraha abuurka yihiin aad u yar, waxay qaadataa bil ah si aad u Germinate, dhirta sprouted waa mid aad u daciif ah). Habka ugu wanaagsan wuxuu noqon karaa biqilka horudhac ee abuurka ee lagu koriyo:
Laga bilaabo Maarso ilaa horraantii May, miraha waxaa lagu beeray (qoto dheer beerashada - 0.5-1 cm) weel wax lagu beero (isku dar ah ciid iyo peat oo isku mid ah). Ka hor inta aan la soo bixin, weelka waa in lagu xiraa filim daahir ah ama dhalo. Caadi ahaan (at heerkul ah 25-30 ° C) caleemaha Giriig ah toddobaad gudihiis;
bisha koowaad ee lagu hayo qoyaanka ciidda dhexdhexaad ah, geedo khafiif ah. Dhowr bilood ka dib, geedo ayaa horeba ku habboon loogu beeri lahaa goobta.
Waa muhiim! Thyme waxay si xor ah ugu dhufan kartaa adiga oo is-abuuraya isla markaana kordhiya aagga koritaanka.
Waxaa jira laba siyaabood oo loogu talagalay dhalashada dhirta ee khudradda:
Qaybinta baadiyaha. Kobaca caadiga ah, baadiyaha barafka waa in loo qaybiyaa saddexdii sanaba mar.
Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad qodo geedka, ruxin ciidda ka soo baxda rhizomes, saldhigga u kala qaybsan burbur iyo xakameyn geeddi socodka yar ee xididada.
Taas ka dib, dhul. Wixii fiicnaan ka fiican, qaybaha beerta ee baadiyaha waa in lagu daboolaa weel dhalo ah.
Gooyn. Sidan oo kale noocyo yaryar ayaa si wanaagsan u jilicsan. Caleemaha la gooyo guga waxaa lagu rujiyay weel qamadi.
Weelka waxaa lagu daboolay filim, gooyntu waa inay ahaato mid wakhti yar ah oo biyo ah laga bilaabo dhalada buufinta. Burburintu waxay dhacdaa 15-20 maalin.
Dhibaatadu waxay dhacdaa hal bil ka dib marka ay timaaddo.
Ma taqaanaa? Thyme waxay bogsiineysaa guryaha, sababtoo ah jiritaanka thymol ee asliga ah iyo caleemaha, oo si firfircoon u dagaallamaya bakteeriyada qoyaanka kookaha, laakiin waxay ka yaryihiin sunta kale.